ဟောငျးပဋိညာဉ်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်အသစ်သောပဋိညာဉ်တရား (ဓမ္မသစ်ကျမ်း) က၎င်း၏နေ့ကရှိခဲ့ပါတယ်။ ယရှေုခရစျသနှင့်သောအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကိုသွားနိုင်သည်!
ဟောငျးပဋိညာဉ်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်အသစ်သောပဋိညာဉ်တရား (ဓမ္မသစ်ကျမ်း) က၎င်း၏နေ့ကရှိခဲ့ပါတယ်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သညျယရှေုခရစျသ - သူတို့ဟာလာမည့်ယဇ်ပုရောဟိတ်အဘို့အခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင်ယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသို့နှငျ့ယရှေုကိုယုံကြည်ကြသူအားလုံးယဇ်ပုရောဟိတ်။ မြှတို့ကိုအကြှနျုပျတို့သညျယရှေုခရစျကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအဆက်အသွယ်ရှိသည်။ မရင့်သေးငယ်တဲ့ကို select လုပ်ပါအုပ်စုတစ်စုဟောင်းသောပဋိညာဉ်တရား၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ဟုခေါ်တွင်။
1 Pt 2:9။ သင်တို့မူကားတစ်ဦးကိုရှေးခယျြမျိုးဆက်တစ်တော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးသန့်ရှင်းသောလူမျိုးတစ်ဦးပိုင်ထိုက်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏; သငျတို့သညျသူ၏အံ့သြဖွယ်အလင်းထဲသို့မှောင်မိုက်သငျသညျအထဲကခေါ်တော်မူသောသူသည်သူ၏အံ့သြဖွယ်အကျင့်ကိုကြွေးကြော်သင့်ကြောင်း။
ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ရထားတဲ့ကြားခံအဖြစ်မဟုတ်လက်ရှိအချိန်တွင်မည်သည့်မွကွေီးပုရောဟိတ်လုပ်ပါ။ ယရှေုခရစျသနှင့်သောအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကိုသွားနိုင်သည်! သူကကရာနီ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်မှတဆင့်အသစ်တခုလူနေမှုလမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့။
ဟေဗြဲ 10:19 ။ ဘယ်လိုညီအစ်ကိုတို့, ငါတို့သည်သူကုလားကာတဆင့်ငါတို့အဘို့အဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာသစ်တစ်ခုနှင့်နထေိုငျလမျးဖွငျ့ယရှေု, 20 ၏အသွေးအားဖြင့်အမြတ်ဆုံးသို့ဝငျရဲရငျ့စှာရှိခြင်းနိုငျသညျ, မိမိဇာတိပကတိ၌ဆိုတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်;
အခုတော့မည်သူမဆိုယေရှုနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နှငျ့ဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျယရှေုကိုလကျခံဖို့ငါ့ချစ်ချင်ပါနဲ့, သင်နေတုန်းပဲဒါကြောင့်ပြုမိကြပြီမဟုတ်လျှင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်?
Vecka 29, fredag 23 juli 2021 kl. 17:38